ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 6
Interview with U Win Tin (ဒေါ်စု အမေရိကန်ခရီးစဉ်နဲ့ အဝေးရောက်တွေ)
ဒေါ်စု အမေရိကန်ခရီးစဉ်နဲ့ အဝေးရောက် ပရိသတ်၊ အင်န်အယ်ဒီ နဲ့ လှုပ်ရှားသူများ ကိစ္စ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂ အင်န်အယ်ဒီပါတီနဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်နဲ့ မိုးမခမီဒီယာတို့ရဲ့ အင်တာဗျုးကဏ္ဍကို...
အရှုပ်ထဲမှာ ရှင်းအောင်နေ (Interview with U Win Tin)
အရှုပ်ထဲမှာ ရှင်းအောင်နေ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ စက်တင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၂ အင်န်အယ်ဒီပါတီနဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ နောက်လိုက်တွေရဲ့ စည်းရုံးရေး အတော်ခရီးရောက်နေပြီလား။ ညီလာခံလုပ်မယ်ဆိုကာမှ အချင်းချင်းတွေကြား ဆန္ဒပြတာတွေ၊ ကန့်ကွက်တာတွေ ကြားနေရတယ်။ ...
အနှစ်သာရတွေကနေ ပုံသဏ္ဍန်တွေဆီသို့ (Interview with U Win Tin)
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၂ ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ မဆုံဖြစ်တာ ဇွန် ၂၂ ကတည်းကပါပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပခရီးစဉ်၊ လွှတ်တော်သို့ ဇူလိုင်လဆန်းမှာ ပထမဦးဆုံး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်၊ ၁၉...
Interview with U Win Tin – နှစ်ဖက်စလုံးက လူတွေမှာ ပြောစရာတွေချည်းပဲ
နှစ်ဖက်စလုံးက လူတွေမှာ ပြောစရာတွေချည်းပဲ ဦးဝင်းတင်နဲ့ စကားပြောဖြစ်သမျှ။ မိုးမခ။ ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၁၂ ဒီတပတ်မှာ ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တာတွေ ရှိတယ်။ မေးခွန်းနဲ့ အဖြေတွေကို အတိအကျ မရေးတော့ဘူး။ ဆရာ့မိတ်ဆွေ ပါတီကလူငယ်တွေ၊...
U Win Tin – တသက်တာလုံး အာဏာရှင်ကို ဖီဆန်တဲ့ သတင်းစာဆရာ လူထုစိန်ဝင်း
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်ရဲ့ အမှတ်တရစကား၊ မိုးမခ၊ ဇွန် ၁၈၊ ၂၀၁၂ ကိုစိန်ဝင်း ဆုံးတယ်ဆိုတာ ဒီမနက်မှာ ကြားတယ်။ သူနဲ့လည်း မတွေ့ဖြစ်တာလည်း ၃ လလောက်ရှိသွားတယ်။ သူ့ကျန်းမာရေးကြောင့် ငါတို့လည်း သူ့အိမ်မှာ သွားမတွေ့ဖြစ်ဘူး။...
Interview with U Win Tin – လူထုထောက်ခံမှုမှသည် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုဆီသို့နဲ့ အစုိုးရတရပ်ရဲ့ ယူရမယ့်တာဝန်များ
လူထုထောက်ခံမှုမှသည် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုဆီသို့နဲ့ အစုိုးရတရပ်ရဲ့ ယူရမယ့်တာဝန်များ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ – မိုးမခ၊ ဇွန် ၃၊ ၂၀၁၂ မေး။ ။ ဒေါ်စုရဲ့ ပြည်ပခရီးစဉ်မှာ ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ ကြိုဆိ်ုမှုတွေကို ဆရာတို့က...
Interview with U Win Tin – သော့ခလောက်ကြီး တန်းလန်းနဲ့ပဲလား (၂)
သော့ခလောက်ကြီး တန်းလန်းနဲ့ပဲလား ပြီးတော့ ရှေ့ဆက်စရာတွေ (၂) ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ မေ ၇၊ ၂၀၁၂ အင်တာဗျူးအဆက် – ပထမပိုင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲနိုင် အမတ်များ လွှတ်တော်တွင်း ၀င်ရောက်နိုင်ဖို့ ကျမ်းကျိန်ရန်...
Interview with U Win Tin – သော့ခလောက်ကြီး တန်းလန်းနဲ့ပဲလား ပြီးတော့ ရှေ့ဆက်စရာတွေ (၁)
သော့ခလောက်ကြီး တန်းလန်းနဲ့ပဲလား ပြီးတော့ ရှေ့ဆက်စရာတွေ (၁) ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ မေ ၆၊ ၂၀၁၂ ဒီတပတ် ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာတော့ဖြင့် အင်န်အယ်ဒီပါတီက ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်တော်တက်...
Interview with U Win Tin – လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆင်ခြင်တုံတရား ရှိသလား
လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆင်ခြင်တုံတရား ရှိသလား ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၂ ဧပြီလ ၁ ရက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အတုိုက်အခံ အင်န်အယ်ဒီပါတီက ကိုယ်စားလှယ် ၄၃ ဦး တခဲနက်...
Interview with U Win Tin – သူများတွေအတွက် ဦးဝင်းတင်
သူများတွေအတွက် ဦးဝင်းတင် ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ။ မိုးမခ၊ မတ် ၁၂၊ ၂၀၁၂ ၁၉၈၉ ဇူလိုင်မှာ စတင်ပြီးတော့ ၂၀၀၈ နိုဝင်ဘာလ အထိ ၁၉ နှစ်လုံးလုံး စစ်အစုိုးရရဲ့ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းခြင်းကို...
Interview with U Win Tin – အင်တာဗျူး အပုိုင်း ၃၊ ရွေးကောက်ပွဲသို့ သွားရာလမ်း
ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ – ပြည်ထောင်စု၊ လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေးရေချိန်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲသို့ သွားရာလမ်း မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၂ အင်တာဗျူး အပုိုင်း ၃၊ ရွေးကောက်ပွဲသို့ သွားရာလမ်း နောက်ဆက်ပြီး မေးချင်တဲ့မေးခွန်းက...
Interview with U Win Tin – လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေး ရေချိန်
ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ – ပြည်ထောင်စု၊ လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေးရေချိန်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲသို့ သွားရာလမ်း မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၂ အင်တာဗျူး အပုိုင်း ၂၊ လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေး ရေချိန် ပြည်ထောင်စုနေ့...
Interview with U Win Tin – ပြည်ထောင်စု၊ လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေးရေချိန်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲသို့ သွားရာလမ်း
ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ – ပြည်ထောင်စု၊ လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေးရေချိန်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲသို့ သွားရာလမ်း မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၂ အင်တာဗျူး အပုိုင်း ၁၊ ပြည်ထောင်စု ပြည်ထောင်စုနေ့ ၆၅ နှစ်မြောက်...
Interview with U Win Tin – Time to go for Election and Parliament ?
> လွှတ်တော်ထဲဝင်ကြရမယ့်အချိန်၊ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရေး ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊၂၀၁၂ မေး။ ။အခုအချိန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီး လွှတ်တော်ထဲကနေလုပ်ကြရမယ်လို့ ပြောရတော့မယ့်အချိန်လား။ ဖြေ။ ။ အခုအချိန်မှာက ရွေးကောက်ပွဲကာလဖြစ်နေတယ်။ ၀င်ပြီး အရွေးခံမယ့်...
Interview with U Win Tin – 2011 Questions
> ၂၀၁၁ အပြောင်းအလဲများ၊အငြင်းပွားစရာများ ဦးဝင်းတင်နဲ့မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၁ ယမန်နေ့က ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်မှာ အဓိကမေးဖြစ်တာကတော့ ၂၀၁၂ နှစ်သစ်သို့ မကူးခင် ၂၀၁၁ နှစ်အတွင်းမြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများကို ပြန်ပြောင်းကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတိုးတက်မှုတွေဆီ ဦးတည်နေပြီလား၊...
Interview with U Win Tin – Spirit of Student Union lives forever
> သမဂ္ဂစိတ်ဓာတ်နဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေမျိုးဆက်သစ်တွေဆီ လက်ဆင့်ကမ်းဖို့ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၃၊၂၀၁၁ မြန်မာပြည်မှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးပုံသဏ္ဍန်တွေထဲက၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အစုအဖွဲ့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေအကြောင်း ယခင်တပတ်က ပြောဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပတ်မှာတော့ ဒီဇင်ဘာ ၂၀...
Interview with U Win Tin – NLD & 88 Generation Students
> တင်ရေး၊၀င်ရေး၊ ပြင်ရေး၊ ထူထောင်ရေး (NLD နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်) ဦးဝင်းတင်နဲ့မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၁ ဒီတပတ် ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာမေးဖြစ်တဲ့ မေးခွန်းတွေကတော့ လက်ရှိပြည်တွင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရေး၊...
Interview with U Win Tin – Is it time?
> အကောင်းမြင်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလား ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၁ မေး။ ။နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာ ရောက်ရှိလာတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်ကိုယ်တိုင်ကမြန်မာပြည်အရေးကို လက်ရှိအစိုးရခေါင်းဆောင်များနဲ့သာမကအတိုက်အခံနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ လူမှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများ၊စာနယ်ဇင်းသမားများနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး သဘောထားအမြင်တွေ ပြောသွားပါတယ်။ အဓိကကလင်တန်ပြောဆိုသွားတဲ့...
Interview with U Win Tin – Let’s start over
> အသစ်ကပြန်စ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၁ မေး။ ။နိုဝင်ဘာ ၂၄က အင်န်အယ်ဒီက လူ ၂၁ ဦးစာရင်းနဲ့ နေပြည်တော်မှာ ပါတီမှတ်ပုံတင်ဖို့ လျောက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်။...
Interview with U Win Tin – To next challenge, risk & sacrifice …
> စွန့်လွှတ်စွန့်စားရမယ့် စိန်ခေါ်မှုဆီသို့ ဦးဝင်းတင်နဲ့မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာ၁၈ ရက်နေ့က အင်န်အယ်ဒီပါတီက ဗဟို ဦးစီးအစည်းအဝေးနဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ပြုတဲ့ဆီမှာ လက်ရှိ အစိုးရရဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့ ပါတီကို မှတ်ပုံတင်ဖို့၊...